Ukuphathwa kweziNgulube Zensikazi Nezingane Zazo
Izingulube ezindala zezilwane ezizalisayo zinezidingo ezahlukene ezivela kwabancelisayo nabalimi kanye nokunakekela kumele zithathwe ukuze zihlangabezane nesidingo esikhethekile sezindlu, ukudla nokuvikeleka ezifweni.
Izidingo Zezingulube Ezikhulelwe
Ukuhlwanyela, okuncane kunesidingo lapho ukhulelwe (okuthiwa 'uhlwanyele owomile' embonini) kodwa usenayo izidingo.
Ukuhlwanyela okukhulelwe kudinga inkampani yezinye izihlwanyela futhi kudinga ukuvikeleka elangeni elishisayo, imimoya ebandayo nemvula.
Udinga isikhala esanele sokuhamba ngokukhululekile futhi uziphathe njengengulube. Iningi lemfuyo encane ayisebenzisi ama-crrowing ekranini yokuhlwanyela. Abalimi abathile bafaka izitshalo ezinsukwini ezimbalwa zokuqala emva kokubeletha ukuze baphathe izinkinga futhi babone ukuhlwanyela emva kwesikhathi sakhe sesonto eli-3 ukuqinisekisa ukuthi uye wakhonza ngempumelelo futhi ukhulelwe.
Ukuhlwanyela okukhulelwe kudinga ukondla okwanele kodwa hhayi kakhulu. Cishe ngo-2 kuya kwezingu-3 kg ngosuku ngezo zonke izithako ezidingekayo kuhlanganise nokuqukethwe okuphezulu kwefiber njenge bran, hay, ukudla okuhlaza (uma kutholakala) futhi okungenani amaprotheni angu-12%. Zonke izigayili zizokwazi ukuhlinzeka ngokudla noma ama-pellets "okuhlwanyelayo nokudla" futhi lokhu kufanele kwenziwe okungenani isigamu sokudla kwabalimi ngokulinganisela okuvela kwimikhiqizo eyenziwa ifomu elikhona noma izithako ezinomsoco noma omuncu.
Qaphela: ungalokothi ukondle ukudla okubunjiwe noma okunuka ezingulube futhi nakanjani akukho nyama yezilwane. Inyama i-spreader ephumelelayo kakhulu yezifo ezithathelwanayo.
Ngesonto eledlule ngaphambi kosuku olulindeleke ukuthi afake isikhathi eside (gcina amarekhodi) uhambisa umhlwanyelo wakhe emgodini owodwa wokukhipha imali. Le ndlu, i-crate noma indawo yokukhosela kufanele ibe yisimo sezulu, isibonakaliso sezingulube, sihlanzekile kakhulu futhi sinokulala okuningi ukuze simenzele isidleke.
Izidingo ze-Litter Newborn Litter
Kubaluleke kakhulu ukuqaphela ukuthi izidingo zokushisa nezemvelo zomhlwanyelo kanye nombhede wakhe zihlukile.
Izingulube zidinga zonke izifudumalo ezingayithola. Kuyinto efiselekayo ukuwahlinzeka ngokuthi 'i-creep' okungukuthi indawo yokukhosela evaliwe njengenja yenkampani enesihenqo esithintekayo ukuvumela ukuhlanza okulula nokuqapha. Imibhede engcono kakhulu i-pine shavings. Vikela ukungena ukuze izingulube zingene kodwa azihlwanyeli; ikakhulukazi lapho bedla izingulube ngezindleko zabo ezibiza kakhulu.
Izingulube zensikazi ngaphandle uma ekhona esikhwameni se-farrowing, kuzothambekela ekuqamba amanga phezu kwabantwana abancinyane futhi kuzoba khona ukulahlekelwa ngenxa yokuchotshozwa.
Izingulube zensikazi zidinga amanzi angenakuvinjelwa ahlanzekile njalo atholakalayo. Abancelisayo bazoqala ukuphuza amanzi ukuze bahlanganise ubisi obuntshontsha uma sekuphele amasonto ambalwa.
Emva kokubeletha, umhlwanyeli udinga ukudla okucebile kakhulu lapho uveza ubisi. Kulungile ukondla ukuhlwanyela ukuhlwanyela 'ukuhlwanyela ukudla okuhlwanyelayo' nokuningi kwalo - 6kg ngosuku akuyona into engavamile. Ukuhlwanyela ukuhlwanyela akufanele neze kulambile. Yondla kathathu ngosuku ukuvimbela ukondlula isisu sakhe.
Ama-pigs azoqala ukudla ukudla komama ngenxa yelukuluku kusukela ngesonto elidala noma kunjalo kodwa ukudla okuhlwanyelayo kungabonakali kubantu abasha. Esikhundleni sokunikeza abantwana ithuba lokuphumula kusukela ezinsukwini ezingaba yishumi ngaphambi kokuba banqunywe futhi banqande inani lansuku zonke ukuya ku 250 g (ubukhulu begayi yekhofi) ezinsukwini eziyisihlanu ezizayo, Ukwandisa inani lezinsuku zonke ukuze izinhlelo zabo zokugaya zilungele ukubhekana ukudla okomile ekuguleni.
Izidingo Zengulube Yenkunzi
Ngezinye izikhathi isifuba sibizwa ngokuthi isilwane esinakekelwa kakhulu epulazini naphezu kokuhlinzeka isigamu sezinhlobo zegciwane futhi ngaleyo ndlela ikhwalithi yesizukulwane esilandelayo. Izidingo zezimbuzi zilula:
Udinga ipeni lakhe lezinyosi ukuze lisetshenziselwe ukukhonza izinhlanzi. Njalo ulethe ukuhlwanyela emathunjini bese ugcina amarekhodi ezinsizakalo zakhe.
Phakathi kwezinsizakalo angahlala nezihlwanyela ezomile - ubukhona bakhe buzuzisa futhi bunomphumela wokuxazulula. Uzobona nezinhlanzi ezisebusweni uma ziphumile futhi kungenzeka ukuthi zisebenzele. Gcina amarekhodi.
Ngokuvamile isigebhu sivunyelwe ukuba yingxenye yezinkomo endaweni evulekile. Ukukhwanyelwa kokuhlwanyela ekushiseni kuyoba "ukuvumela imvelo ithathe inkambo yayo". Lokhu kunamathuba amabi. Umlimi wezingulube angazi ukuthi yikuphi okuhlwanyelayo okukhulelwe nokuthi yikuphi usuku nokuthi yikuphi ukuboshwa (uma kunezingaphezu kweyodwa). Futhi, usuku olulindelekile lokuzalwa aluzokwaziwa, okwenze kube nzima ukuhlela.
Uma kunamathumba angaphezu kweyodwa emhlambini wezinkomo, bangase balwele ukudala. Isibungu esiphezulu noma esisodwa ngeke sibe nemingcele ukuthi ukhonza kangaki ngamunye ukuhlwanyela. Lokhu kungaholela ekukhuleni okukhathele, okuhlwanyelayo okuhlwanyelayo nokuhlwanyela okulimalayo noma ikakhulukazi, ama-gilts.
Isikhumba sidinga ukwelashwa okuvamile futhi okuphelele ukuze kulungiswe ngoba ngokuvamile isakazwa semangcwaba yonke imfuyo. Lokhu kudluliselwa ngesikhathi sokuvuthwa kwemizuzu engu-6 kuya kwemi-15. (Ukwelashwa kwe-mange akulula futhi kuyasebenza uma imiyalo ilandelwa.)
Ukunciphisa ukudla kwesibindi ukuze umvimbele ukuba angaphezu kwesisindo, onobuvila, engenamzali kanye nomhlukumezi. Ukulinganisa nokulinganisa kwakhe kuzokufana nokutshala okumile.